Indlu enamagumbi amabini ePerla - I-Airbnb
Indlu enamagumbi amabini ePerla
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguVesim Sas
UVesim Sas yi-Superhost
Igumbi elitsha elihlaziyiweyo elinamagumbi amabini, lifakwe ngokupheleleyo: ukungena, igumbi lokuhlala elinekhitshi, igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela. Ilungele ukuhlala okufutshane kunye nokuphakathi kwexesha elide.
Indlu enamagumbi amabini inegumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala elinekhitshi. Igumbi linebhedi ephindwe kabini kwaye kukho ibhedi yesofa yomntu omnye kwigumbi lokuhlala. Indlu igcwele i-oveni, i-microwave, ifriji, umatshini wokuhlamba.
Igumbi lokuhlambela linesixhobo sokomisa iinwele.
Indawo yokuhlala ibekwe kwiziko lembali laseRivarolo kwaye ilungele iinkonzo kunye neevenkile, iimitha ezingama-200 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kunye neemitha ezingama-50 ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi.
Kwindawo esembindini isetyenziswa kakuhle yimivalo, iivenkile, iindawo zokutyela kodwa kwangaxeshanye kwindawo ezolileyo neyabucala.
Umbuki zindwendwe ngu- Vesim Sas
Indawo yokutyela izimele ngokupheleleyo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rivarolo Canavese